Design - Shenzhen King Fu Agba Printing Co., Ltd
Azụ siri ike Akwụkwọ
Azụ siri ike Book
Coffee Isiokwu Akwụkwọ
Children Board & Pop Up Akwụkwọ
Azụ siri ike ụmụaka akwụkwọ
Softcover ụmụ akwụkwọ
Gburugburu & Waya-O agbụ akwụkwọ
Sadulu kpachie Book
Ndepụta Ngwaahịa & Broshọ
Akwụkwọ ịde & Journal Book
Wall & Desk Kalinda
Akwụkwọ Box & Cards
Hangbag & Notepad & Akwụkwọ mmado
igba obara Ikpehe
Mgbe mwube gị faịlụ na e nwere ihe atọ dị mkpa ebe iburu n'uche:
Kpaa ebe: Nke a bụ nke nke mkpụbelata page size. Ọ bụ size na gị okokụre akwụkwọ ga-trimmed, ịdị elu na ogologo nke page.
Igba obara: Nke a bụ ebe na ọ bụghị naanị mkpụbelata akara. Ọ bụrụ na ị nwere a ndabere, image ma ọ bụ ọ bụla imewe mmewere na ị chọrọ igba obara kwụsịrị page, ị ga-ịgbatị a site 1/8 "(3 mm) n'ofè mkpụbelata akara.
Nchekwa ebe: Nọgidenụ na ederede igbe na-aga dị na mma ebe, nke dị na kacha nta 1/8 "(3 mm) si mkpụbelata ebe.
Na ngwa nbipute rụnyere amanye peeji nke na mpempe akwụkwọ, ya mere ọ dị mkpa melite bleeds na niile 4 n'akụkụ nke na peeji nke.
Maka nsonaazụ kacha mma na profaịlụ dị mkpa ka a etinyere ihe oyiyi na Photoshop, ọ bụghị InDesign:
Mgbe akwadebe gị image faịlụ na Photoshop, họrọ si Dezie / Tọghatara Profaịlụ ma họrọ otu n'ime ndị na-esonụ si dobe ala menu:
• N'ihi GRACoL , Adobe profaịlụ: ntekwasa GRACoL 2006 (ISO 12647-2: 2004)
• N'ihi FOGRA ntekwasa, Adobe profaịlụ: ntekwasa FOGRA39 (ISO 12647-2: 2004)
• N'ihi FOGRA uncoated, Adobe profaịlụ: uncoated FOGRA47 (ISO 12647-2: 2004 )
Nyochaa ụkpụrụ nduzi na nkebi nke a aka kwadebe gị faịlụ dị ka n'ụzọ ziri ezi dị ka o kwere. Nke a ga-enyere iji zere njehie n'oge preflight. Ọ bụrụ na ị bụghị n'aka na gị faịlụ na-melite n'ụzọ ziri ezi biko kpọtụrụ gị ahịa Executive n'ihi na ndụmọdụ.
Ngwa Files nabatara:
• Adobe illustrator (Ọ bụghị adabara ime layout. Biko machibido ka kwụ n'ahịrị na nkà na otu page akwụkwọ, dị ka logos, Jaketị, wdg)
• Bipute njikere PDFs kere si ngwa faịlụ depụtara n'elu
Anyị nwere ike ikwu na ị na-eji PostScript, OpenType ma ọ bụ TrueType Akara ókwú. Ụfọdụ Akara ókwú ina-emerụ n'oge nnyefe, dị ka na-ere n'elu DVD ma ọ bụ na-ebugote site FTP. Anyị na-akwado compressing Akara ókwú tupu n'ido ha.
Adịghị ike Akara ókwú na-enweghị a kwekọrọ ekwekọ ngwa nbipute font. Ihe atụ, na gị okirikiri nhọrọ ukwuu usoro ị nwere ike họrọ "Helvetica" wee pịa a "Bold" style n'ihi na e nwere a kwekọrọ ekwekọ "Helvetica Bold" na ngwa nbipute font. Ma ọ bụrụ na ị họrọ "Futura Arọ" wee tinye a "Bold" style ya ị ga-esi a bolder version of na font n'ihi na e nweghị kwekọrọ ekwekọ ngwa nbipute font.
Anyị nwere ike ikwu na ị na họrọ font na ị chọrọ ozugbo na font menu kama ahọpụta isi font na itinye a style. Na nnukwu Akara ókwú na e nwere ọtụtụ igwe nke ikpeazụ Usoro nwere ike ime ka gị na ya pụta na-ejighị n'aka.
Mgbe mwube gị font agba, biko na-ụkpụrụ nduzi ndị a n'uche:
8 pt. na 100% nke siri ike na agba.
12 pt. na 60% 80% nke na agba
16 pt. na CMYK agba. Nta CMYK font ga-ebipụta na jagged n'ọnụ na-egosi ajị ajị (ma ọ bụ gbanyụọ aha) n'ihi na ntụpọ na-ebi dị ka ihuenyo.
Trapping na-inyịme a graphic ma ọ bụ oyiyi site 0.25pt zere ihe ọ bụla na-acha ọcha okirikiri ọkụ n'isi ma ọ bụ ọdịiche gburugburu oyiyi ma ọ bụ graphic. N'ozuzu usoro agba adịghị mkpa tọrọ atọ, ọ bụ ezie na e nwere ụfọdụ gupuru. InDesign ka preset ọnyà ntọala, n'ozuzu na ị dịghị mkpa ka nchegbu banyere trapping.
I kwesịrị ịmata nke trapping mgbe ị na-na-akụ onye oyiyi ma ọ bụ imewe mmewere si a siri ike ndabere. E nwere ụzọ abụọ izere ọcha okirikiri ọkụ n'isi, ma ọ bụ ihe yiri ka misregistration, site n'itinye na ezi Trapping ma ọ bụ site overprinting. Overprinting na-atụ aro maka ederede ma ọ bụ mkpa ndịna ma ọ bụ e, ma cheta na overprinting ga ịgbakwunye kenyere agba nke ihe na-akpata na agba na nwere ike imetụta ihe na agba.
Ọ bụrụ na ị nwere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ederede (c: 95, m: 0, y: 80, k: 0) ọdụ na a-acha anụnụ anụnụ (c: 95, m: 20, y: 10, k: 0) ndabere, ị gaghị mkpa ka ọnyà n'ihi na nke siri ike cyan ndabere na ọ bụrụ ederede bụ 16 pt. ma ọ bụ nta ị ga na-adọba ederede OVERPRINT.
Image Nịm Up
Hi nchapụta image files mgbe niile kwesịrị-osụk ka TIFF, PSD, Ai ma ọ bụ EPS faịlụ. The kasị mkpa na a quality amụba bụ ikpeazụ file size. All image files kwesịrị 300 DPI (ntụpọ kwa inch) na akara art kwesịrị 1200 DPI na ikpeazụ size.
A nnukwu image scanned na 150 DPI bụ functionally Ẹkot ihe oyiyi ọkara na size na-scanned na 300 DPI. Ma ga-eme ka a faịlụ na bụ Olee ihe enyemaka otu size.
Mgbe na-akwadebe gị image files mkpa ka ị weghara nri ego nke ozi. Ọ bụrụ na gị faịlụ ndị oke obere na ha apụta blurry ma ọ bụ pixelated. Ọ bụrụ na ha bụ oke buru ibu ha na-eme na imagesetter ọrụ kwa ike ma ọ bụ nwere ike na-emepụta a Postscript njehie.
Images erughị 300 DPI (ma ọ bụ 1200 DPI maka akara art) ga-eme ka ihe njehie n'oge preflight usoro. All hi-nchapụta oyiyi mkpa ka a dị ka CMYK, na karịa + 15% ma ọ bụ -15% nke mmeputakwa size. Sere ibudatara a web saịtị na-abụkarị nnọọ ala-mkpebi maka ebipụta amụba. Zere iji edoghi n'ime sere na-thinner karịa 5 uche.
All oyiyi ga-osụk ka CMYK, bụghị RGB format. All agba ga-retouched na agba gbazie na Photoshop tupu oyiyi a dị n'ime InDesign.
Raster ma ọ bụ bitmap oyiyi na-ẹdude ke ụdị obere n'ámá na okporo ka ụkpụrụ, mara dị ka pikselụ, na-anọchite anya ndịna. Onye ọ bụla pixel na a bitmap image nwere a kpọmkwem ebe na agba uru kenyere ya. The kasị file ụdị bụ TIFF, EPS ma ọ bụ Photoshop PSD faịlụ.
Mgbe akwadebe foto faịlụ maka ebipụta amụba ị kwesịrị ị na fọrọ nke nta mgbe emepụta TIFF oyiyi ma ọ bụ PSD faịlụ. TIFF faịlụ a na ahụkarị, na ndị na-emeghe format, nke pụtara na ha nwere ike ga-eji na InDesign ma ọ bụ Quark. PSD faịlụ nwere ike na-eji na Adobe Photoshop mmemme.
Ọzọ nkịtị oyiyi faịlụ bụ a JPEG. N'ụzọ bụ isi eji maka foto, JPEG bụ otu n'ime mmadụ abụọ nkịtị faịlụ ji na web. Ọ bụ a abịakọrọ format otú ọmụma na-efu n'oge mkpakọ. Ọ bụrụ na ị nwere a JPEG file na ị chọrọ iji na-ebipụta, na-emeghe ya na Photoshop ma họrọ: Image-> Mode-> CMYK Agba (ma ọ bụ Grayscale).
Ọ bụ mma na resample si a nnukwu image ka a nta otu. Photoshop nanị oké ọṅụ + na mmezi pikselụ na ihe oyiyi ga-apụta nta ma ọ bụla bit dị nkọ dị ka ọ bụ tupu.
Ọ bụ mgbe a ezi echiche upsample si a obere ihe oyiyi na a ibu otu. Ke idaha emi, Photoshop agbakwụnye pikselụ ka onyinyo. Ihe omume nyere agba ọhụrụ ndị a pikselụ dabeere na agba nke agbata obi pikselụ. Nke a nwere ike ịkpata ihe oyiyi ahụ bụ blurrier karịa mbụ, dị ka e gosiri na nri.
Mgbe n'okpuru GIF image faịlụ maka ebipụta mmepụta.
Black na White Images
Dabere na gị oru ngo, i nwere ike melite gị ihe oyiyi dị ka 1 agba nwa na-acha ọcha, duotones, ma ọ bụ 4 agba CMYK oyiyi.
1 agba ọcha na oji image melite n'ozuzu iji usoro nwa. Isi na onyinyo na-melite na grayscale.
2 agba ọcha na oji image na-melite iji usoro nwa na a PMS agba. The PMS agba nwere ike iji na-eme a sepia agba ma ọ bụ PMS awọ ike na nkọwa na grayscalefrom ẹkenemede ka onyinyo.
4 agba ọcha na oji na-kere iji CMYK na-enye ndị kasị zuru ezu site ẹkenemede ka onyinyo. 4 agba nwa ọcha na ihe oyiyi na-achọ a nnọọ siri itule. Mgbe mwube gị faịlụ, i nwere iji jide n'aka na ọ dịghị a na agba igba gị ihe oyiyi. Ị ga-ewepụ nkedo na Photoshop n'ihu ihe oyiyi ahụ na-dị n'ime InDesign.
Mmepụta niile vector atụ faịlụ dị ka EPS ma ọ bụ Ai (illustrator). Jide n'aka na-dakọtara na agba aha ndị faịlụ ka aha nke otu na agba na okirikiri nhọrọ ukwuu software.
Ụfọdụ nsụgharị nke Adobe illustrator ekwe ka ị na-eweli ma ọ bụ belata Adobe illustrator si ndabere mmepụta mkpebi. Ekwela ịgbanwe a ọnọdụ. Ẹsụhọde mkpebi ga-eme ka ogbonye kpụrụ ụzọ. Ịzụ ya nwere ike inye enweghị isi njehie n'oge preflight.
Zọpụta akara art faịlụ dị ka bitmapped oyiyi. Ọ bụrụ na ị na-azọpụta ha grayscale, n'ọnụ nwere ike mmepụta na a halftone ihuenyo na-eme ha egosi blurry ma ọ bụ jagged.
Iji Black ink dee solids
Ọ bụrụ na a nnukwu ebe nke siri ike na nwa ga-agafe ndị ọzọ wuru tints, a ga-a dị iche na njupụta n'etiti ebe n'elu na agba na ndị na-adịghị n'elu agba. Ihe ngwọta bụ iwu a "ọgaranya black" tint mix dị ka ndị a:
Iji a ọgaranya black ga zere ihe ọ bụla doro anya njupụta ọdịiche na nwa solids. Ọ bụkwa a mma usoro maka amị a na ok, edo siri nwa, ọbụna mgbe ọ na-agaghị agafe ọzọ na agba.
Ndị ọzọ na nwa ọcha dị ka iwu, ụdị, na mkpa atụ ọcha ka elu nke 100% na nwa na-setịpụrụ na-overprint.
Tụlee agbakwunye ghọọ na peeji nke ndị na-siri ike ọchịchịrị na agba ihu a na-acha ọcha na peeji nke iji gbochie gawara.
Atọhapụ gị Project
Tupu ẹsụk gị faịlụ, biko jiri Preflight iwu na InDesign elele gị faịlụ.
• naanị ihe oyiyi na-eji na okirikiri nhọrọ ukwuu. Jide n'aka na aha na ọnọdụ nke jikọtara files anaghị agbanwe mgbe ị na-anakọta gị faịlụ.
• All bitmapped image nha kwesịrị dịkarịa ala 300 DPI, na ihe nile vector akara art faịlụ kwesịrị dịkarịa ala 1200 DPI
• TIFF na EPS faịlụ kwesịrị CMYK, bụghị RGB. All oyiyi dị ka TIFF, na ihe nile vector akara art ka EPS.
• Gụnye niile Akara ókwú mee, tinyere ha kwekọrọ ekwekọ ngwa nbipute Akara ókwú, ọbụna ma ọ bụrụ na font na-ejikarị.
• Kwụsị niile ejibeghi agba. InDesign si agba palette nwere a "Họrọ All ejibeghi" nhọrọ nke ga-enyere gị aka ịchọta na ihichapụ ndị a swatches.
• Jide n'aka na onye ọ bụla na agba nwere naanị otu aha.
• mfe ndịna iji kacha nta ọtụtụ ihe na a ngwakọta ma ọ bụ ndị kasị nta na ọnụ ọgụgụ nke ihe na a ụzọ.
• Jide n'aka Photoshop akwụkwọ anaghị agụnye ejibeghi ma ọ bụ na-ezo n'ígwé. Ma ọ bụghị ya, ripping njehie nwere ike ime na-ezo n'ígwé nwere ike mmepụta na ike na-atụghị anya ya pụta.
• Kwụsị ejibeghi ọcha na pasteboard ma ọ bụ ihe ndị ahụ na na-zoro kpamkpam site ndị ọzọ.
• All peeji nke kwesịrị trims na bleeds (bleeds kwesịrị ka 3mm ma ọ bụ 1/4 "n'ofe mkpụbelata na niile 4 n'akụkụ).
• Gụnye ala nchapụta PDFs maka pụrụ isi chọta na / ma ọ bụ laser n'akwụkwọ. Dee page ọnụ ọgụgụ na lasers ma ọ bụrụ na ndị folios adịghị ibipụta ma ọ bụ ala nchapụta PDFs maka pụrụ isi chọta.
• Gụnye iche iche ngwa ma ọ bụ PDF files maka ederede na cover, ikpe ọ bụla ọzọ mmiri (endpapers, ịkọ, wdg)
• Agba nduzi, ọ bụrụ na ị na-enye.
Ị nwere ike n'okpuru gị faịlụ site na wetransfer, Hightail ma ọ bụ ndị ọzọ online faịlụ nkekọrịta program, ma ọ bụ obere mbanye (jide n'aka na-agụnye USB jikọọ kọmputa). Nyefere InDesing ma ọ bụ hi-nchapụta ibipụta njikere PDFs na mkpụbelata akara na bleeds gụnyere.
Maka nkọwa ọzọ na-esi melite PDFs, biko gaa na Adobe enyemaka saịtị: https://helpx.adobe.com/indesign/how-to/indesign-create-pdf-for-print.html?set=indesign-get -started-mkpa-beginners
Copyright © 2012-2022 ShenZhen EZE Fu agba ígwè obibi akwụkwọ CO., LTD.